April 2017 - iftineducation.com
iftineducation.com – Xidigada Quruxda badan ee Priyanka Chopra ayaa sheegtay in markay galaysay Hollywood aaney kusii talagalin inay dadku aqoon usii lahaayeen maadama oo ay xidigad ku ahayd Bollywood. Priyanka oo sii faahfaahinaysa hadalkeeda ayaa tidhi ” Hadaan xidigo ku ahayn Bollywood macnaheedu ma ahan inaan meel walba xidig caan ah ku noqon karno”. Waxa ay intaas ku dartay “Dawlad walba…
iftineducation.com – Manchester City ayaa ku bixin doonto 50 milyan oo ganni si ay ula soo saxiixato daafaca danbeed ka midig ee kooxda Tottenham, ninka lagu magacaabo Kyle Walker waa marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaagan soo socdo. Tottenham iyo England danbeed kooda midig, waa mid kamid ah bartilmaameed yada macalinka kooxda City ninka lagu magacaabo Pep Guardiola, si…
iftineducation.com – Majaladda The Sun ee dalka Britain kasoo baxda ayaa sheegeysa in kabtanka Manchester United Wayne Rooney uu si daran khamri u cabay dhawaan taasoo keentay inuu maandoorsamo. Wayne Rooney ayaa ka yaabsaday dadkii goobtaas lagu sharaabo joogay muddo nus saac ah ayuuna si daran u cabay, 31 sanno jirkaan weerarka uga ciyaara Manchester United ayaase ku dhibtooday inuu lugihiisa…
iftineducation.com – Dowladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay dhalashadii dalka Ingiriiska kala laabteen xaaska Madaxweynaha dalka Siiriya Bishaar Al Asad oo lagu magacaabo Asma Fawaz Al Akhras. Marwada koowaad ee dalka Siiriya ayaa sidoo kale horay looga mamnuucay inay u safarto guud ahaan dalalka Yurub, iyadoo mamnuucidaasina loo cuskaday falalka xadgudubka ah ee lagu eedeeyay odaygeeda.Asma Fawaz Al Akhras iyo Madaxweyne…
iftineducation.com – Waxaa goordhaw qarax xoogan oo dhawaqiisa laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho uu ka dhacay meel ku dhaw xarunta Degmada Hodan ee gobolka Banaadir, qaraxa kadib ayaana la maqlay rasaas kooban oon la ogeyn cida rideysa. Qaraxa ayaa lasoo sheegayaa in uu ahaa Miino dhulka dhinaceeda lagu aasay, waxaana lala eegtay gaari uu leeyahay Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo…
iftineducation.com – Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalo aad u badan dowlada Mareykanka uga baxdo ilaalinta dowlada Sacuudi Carabiya , oo kamid ah dowladaha xariirka wanaagsan kala dhaxeeyo. Donald Trump ayaa sheegay in heshiis dowlada Mareykanka horey ula gashay Boqortooyada Sacuudiga uu yahay mid hal dhinac u janjeera oo dan badan ay ugu jirto dowlada Sacuudiga…
iftineducation.com – Qaar ka mid ah Raisul Wasaarayaasha ugu caansan Qaarada Yurub ayaa ilaaladooda ka dhuuntay ka dibna waxeey siyaabo kala duwan u dhex galeen Shacabka dalalkooda taas oo dad badan ka yaabsatay . Raisul Wasaaraha dalka Austria Mr.Christian Kern ayaa tagay goob Maqaaxi ah oo Boosniyaanka iyo Turkida ku iibiyaan Cuntada ama Raashinka loo yaqaan Pitza-da wuxuuna ku guuleystay in…
iftineducation.com – Madaxweynaha Tanzania, John Magufuli ayaa shaqada ka eryay ku dhawaad 10,000 oo shaqaale dowladeed ah kuwaasoo lagu eedeeyey iney haysteen shahaadooyin been abuur ah. Waxa uu amray inay banneeyaan goobaha ay ka shaqeeyaan ka hor 15 bisha May, haddii aanay sidaa sameynna xabsi iyo maxkamadeyn la isugu dari doono. Mr. Magufuli ayaa falkan kaga jawaabay warbixin uu soo saaray…
iftineducation.com – Waxaa wali magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku sugan Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo oo ay wehlinayaan Wasiiradii ugu badnaa oo la safra Madaxweyne Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa safarkiisa 5aad ku wehlinaaya Wasiirada ugu tayada badan ee Xukuumada Kheyre waxaana kamid ah Wasiiro aan loogu tallo galin safaro badan oo khuseeya dhanka Amniga. Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa kamid…
iftineducation.com – Dadka baraha bulshdu ku wada xiriirto adeegsada, ayaa faafiyay sawirka labo dhakhtar oo dhulka jiifa, qolka qalliinka, kadib markii ay ku jireen shaqo muddo 32saacadood oo xiriir ah, taas oo ay qalliin maskaxda ah ay qof ku sameynayeen. Sawirka waxaa ka muuqda labada dhakhtar oo wata dharka qalliinka lagu sameeyo, waxayna hurdaan dhulka, iyadoo uu ka muuqdo daal farabadan,…